PC-Software | ဆိုင်မွန်စာကြည့်ဆိုဒ်
Showing posts with label PC-Software. Show all posts
PGWare SuperRam 7.8.31.2015
Memory Space ကျဆင်းနေတဲ့ အခါ Programs တွေ ဖွင့်ရတာ နှေးလာသလို ဘယ် Files တွေကို ဖွင့်ဖွင့် လေးလံနေတဲ့ Memory (RAM) ကို Speed Test လုပ်ပေးပြီး စက်ရဲ့ Performance ကို ပိုမို မြန်ဆန်လာအောင် လုပ်ဆောင် ပေးမယ့် Tool လေး တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် SuperRam က ဖွင့်ထားတဲ့ Old Programs တွေကို Windows page files ထဲကို ချိန်းပေးပြီး အသစ်ဖွင့်တဲ့ Programs အသစ်တွေ ကိုသာ RAM ထဲကို ထည့်သွင်း ပေးနိုင် တာကြောင့် Programs တွေနဲ့ Games တွေ Run Times တွေ ပိုမို မြန်ဆန် လာပါလိမ့်မယ်။
Windows 8, 7, Vista, XP & Windows Server 2012, 2008, 2003. 32-BIT/64-BIT ဆိုတဲ့ OS တွေကို Support လုပ်ပေးနိုင် ပါတယ်။
ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ 6MB ပါ။
Original link - http://www.nayminnmaung.com/2015/08/pgware-superram-78312015.html
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Friday, September 04, 2015 1 comment:
ကဏ္ဍ Memory, PC-Software, Speedup
Nitro PDF Pro Enterprise 10.5.1.17
မြန်မာ Font ကို ကောင်းကောင်း Support လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ အကောင်းဆုံး Software လေး တစ်ခုပါ။
အခု ကျွန်တော်တို့ Word ကနေ PDF ပြောင်းတဲ့ အချိန်မှာ အကြောင်း သိပ်မဟုတ် သေးဘူးဗျ။ PDF ကနေ Word ပြောင်းတဲ့ အချိန်ကြတော့ နည်းနည်းလေး ပြဿနာ ရှိလာပါပြီ။
ဘာလဲဆိုတော့ PDF ကနေ Word ပြောင်းတဲ့ အချိန်မှာ မြန်မာဖေါင့် လေးတွေက အတုံး လေးတွေ ဖြစ်သွား တတ်တဲ့ ပြဿနာ လေး ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ဆုံး ထပ်ထွက်လာတဲ့ Update လေးဖြစ်ပါတယ်။
32 နဲ့ 64 ရော အထဲမှာ တစ်ခါတည်း ထည့်ပေး ထားပါတယ်။
Full Version ရအောင် အထဲမှာ Key လေးပါ ထည့်ပေး ထားပါတယ်။
Original link - http://www.nayminnmaung.com/2015/08/nitro-pdf-pro-enterprise-105117.html
ကဏ္ဍ PC-Software, PDF, မြန်မာဖေါင့်
TeamTalk ကတော့ Internet (သို့) Local area network တွေထဲမှာ သူငယ်ချင်း၊ လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက်များနဲ့ Team ဖွဲ့ပြီး လူဦးရေ ကန့်သတ် ထားခြင်း မရှိပဲ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နိုင် စေရန် အတွက် internet voice applications လေး တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အားလုံးမှာ microphone နဲ့ sound card တွေ လိုအပ်မှာ ဖြစ်ပြီး Connection Speed နဲ့ ကိုက်ညီအောင် ဆောင်ရွက်ပေး နိုင်တဲ့ Quality Settings တွေလည်း ပါဝင် ပါတယ်။
နောက်ဆုံး ထွက်လာတဲ့ Update Version လေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖိုင်ဆိုဒ် ကတော့ 14MB ဖြစ်ပါတယ်။
Original link - http://www.nayminnmaung.com/2015/08/teamtalk-5114325.html
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Friday, September 04, 2015 No comments:
ကဏ္ဍ ChatRoom, PC-Software
FileCleaner Pro 4.7.0 Build 137
ဒီ FileCleaner လေး တစ်ခုကတော့ ကျွန်တော်တို့ ကွန်ပျူတာ တွေကို နှေးကွေး သွားစေနိုင်မယ့် Disk Space မလုံလောက်ခြင်း ဆိုတဲ့ Errors တွေကို မိမိတို့ ရှင်းလင်းလို့တဲ့ History, Cookies, junks နဲ့ တခြားသော မလိုအပ်တဲ့ အရာတွေကို ရှင်းလင်းပေးနိုင်မယ့် Tool လေး တစ်ခုပါ။
Automatic PC Cleanup ဆိုတဲ့ အပိုင်းမှာ ဆိုရင် Real Time Cleaner, Scheduler တွေ သတ်မှတ်ပေး ထားပြီး မိမိတို့ စက်တွေမှာ ရှိတဲ့ ဖျက်လိုတဲ့ junk files တွေနဲ့ မလိုအပ်တဲ့ Files တွေကို ရွေးချယ်ပြီး အလိုလျောက် ဖျက်ပေးနိုင် မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Fix Windows Errors အပိုင်းမှာ ဆိုရင် registry cleaner ပါဝင်ပြီး registry errors, conflicts, eliminate system crashes တွေနဲ့ corrupted entries တွေကို လွယ်လွယ် ကူကူနဲ့ Fix လုပ်ပေးနိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မလိုအပ်တဲ့ Toolbars တွေဟာ Free Software အများစုကို Install လုပ်တဲ့ အချိန်မှာ ဝင်လာ တတ်ရုံတင် မက ပြန်ပြီး Uninstall လုပ်ရာမှာလည်း အခက်အခဲ ဖြစ်တာတွေ ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီ Toolbars တွေနဲ့ Add-on တွေအတွက် ဒီ Delete Browser Toolbars လေးကနေ ရှင်းလင်း ပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ဒါ့အပြင် Uninstall လုပ်လို့ မရတဲ့ Programs တွေ အတွက် မိနစ် အနည်းငယ် အတွင်း Uninstall Any Program ဆိုတဲ့ Features လေး ကနေ ရှင်းလင်း ပေးနိုင်ပါတယ်။
ဒီ FileCleaner ဟာ Popular PC Cleaners တွေ ထဲမှာ တစ်ခု အပါအဝင် ဖြစ်ပါတယ်။ Full Version ရအောင် အထဲမှာ Patch Files လေးကိုပါ ထည့်ပေး ထားပါတယ်။
တစ်ခုတော့ ရှိပါတယ်။ ဒီ Cleaner လေးကို Install လုပ်မယ်ဆိုရင် မိမိတို့ စက်ထဲမှာ .Net FrameWork ရှိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ 10MB ဖြစ်ပါတယ်။ အဆင်ပြေပါစေဗျာ ...
Original link - http://www.nayminnmaung.com/2015/08/filecleaner-pro-470-build-137.html
ကဏ္ဍ Cleaner, PC-Software
Windows 10 Login Changer 0.1 Final
Windows 10 အသုံးပြု နေတဲ့ မိတ်ဆွေများ အတွက် Windows 10 Login Changer လေး တစ်ခုပါ။
လေ့လာ စမ်းသပ် အသုံးပြု ချင်သူများ အတွက် တင်ပေး လိုက်ပါတယ်။
ဖိုင်ဆိုဒ်က 1 MB တောင် မပြည့်ပါဘူး။
Original link - http://www.nayminnmaung.com/2015/08/windows-10-login-changer-01-final.html
ကဏ္ဍ PC-Software, Window
Empty Folder Cleaner (Portable)
ဒီတစ်ခါ ကျွန်တော်တို့ အသုံးနဲလို့ အမှတ်တမဲ့ ဖြစ်နေကြတဲ့ Tool လေး တစ်ခုပါ။ ဘာမှမရှိတဲ့ Folders တွေ ကျွန်တော်တို့ စက်တွေထဲမှာ အများကြီး ရှိနေတတ် ပါတယ်။
ဥပမာ Software တစ်ခုပြန်ဖြုတ် တဲ့ အချိန်မှာ Folders တွေ ကျန်ခဲ့ တတ်ပါတယ်။ အရောင်တွေနဲ့ ခွဲခြားပြသ ပေးမှာ ဖြစ်ပြီး အမှန်ခြစ်လေး လိုက်ခြစ်ပြီး Delete လုပ်ပေး လိုက်ရုံပါပဲ ။
အဆင်ပြေအောင် Portable လေး တင်ပေး လိုက်ပါတယ်။ ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ 9.5 MB ရှိပါတယ်။
Original link - http://www.nayminnmaung.com/2015/08/empty-folder-cleaner-portable.html
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Monday, August 31, 2015 No comments:
ကဏ္ဍ Cleaner, Computer, PC-Software, Portable
Protect yourself from Keyloggers Using Keyscrambler
Keylogger နဲ့ KeyScrambler ရဲ့ Features တွေကို မသိသေးတဲ့ မိတ်ဆွေများ အတွက် ရှင်းပြပေး တာပါ။ သိပြီးသား မိတ်ဆွေများ ကတော့ သည်းခံ ပေးပါခင်ဗျာ ။ Keylogger တွေရဲ့ ရန်ကို KeyScrambler လေးနဲ့ ကာကွယ်နိုင်ဖို့ အတွက်ပါ။
1. Keylogger ဆိုတာ ဘာလဲ ???
Keylogger ဆိုတာက သေးငယ်တဲ့ Program နဲ့ တည်ဆောက်ထားပြီး User ရိုက်နေတဲ့ Computer’s keyboard ရဲ့ keystroke တိုင်းကို ဖမ်းယူစစ်ဆေးနိုင်တဲ့ Spy Software တစ်မျိုးပါ။
Keylogger ကို Installed လုပ်ပြီးတာနဲ့ စက္ကန့်ပိုင်း အတွင်းက စပြီး မိမိတို့ လိုချင်တဲ့ Target password တွေနဲ့ တခြားသော Sensitive Data ကို ဖမ်းယူပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ Software Keyloggers နဲ့ Hardware Keyloggers ဆိုပြီး Keylogger အမျိုးအစား (၂) မျိုးရှိပါတယ်။ အခြေခံ အားဖြင့် Keylogger ဟာ စတင် Install လုပ်ပြီးတာနဲ့ background မှာ စတင်အလုပ်လုပ်ပြီး ရိုက်သမျှ Keystroke တိုင်းကို ဖမ်းယူပေးနိုင်တဲ့ အပြင် capture screen shots များ ရိုက်ပြီး attacker ရဲ့ Email , FTP စတာတွေဆီကို ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်။
Keyloggers ကို များသောအားဖြင့် ကလေးများ ၊ အလုပ်သမားများ ၊ ခင်ပွန်း(သို့) ဇနီးသည်တွေကို စောင့်ကြည့်ရန်အတွက် အသုံးပြုကြတာများပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုပဲ Hackers တွေကလည်း Email accounts, Facebook accounts စတဲ့ အကောင့်တွေကို Hack ရာမှာလည်း အသုံးပြုကြပါသေးတယ်။ ဒီလောက်ဆိုရင် Keylogger အကြောင်းကို သိလောက်ပါပြီ။
2. KeyScrambler ဆိုတာ ဘာလဲ ???
Keylogger အကြောင်းပြီးတော့ KeyScrambler အကြောင်းလေး နည်းနည်းပြောပြပါ့မယ်။
KeyScrambler ဆိုတာကတော့ ကျွန်တော်တို့ ရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့ Keystrokes တိုင်းရဲ့ အနှစ်ချုပ် အဓိပ္ပါယ်ကို အဓိပ္ပါယ်ဖေါ်လို့ မရအောင် ပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့ Operating System ရဲ့ အတွင်းထဲမှာ ရှိတဲ့ Software တစ်ခုပါ။
မိမိတို့ ကိုယ်ပိုင် ရုံးခန်းတွေ ၊ မိသားစုတွေ ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ မှာဆိုရင် KeyScrambler ဟာ ယုံကြည်အားထားရတဲ့ Defence Layer လေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့် Keyscrambler တွေမှာ Encrypt Keys, Bypass Malwares like keyloggers, rats (သို့) keyboard API hook programs နဲ့ last decrypt keys ဆိုပြီး အခြေခံအချက်လေးတွေနဲ့ အလုပ်လုပ်ပါတယ်။
Keyscrambler က ဝှက်စာသဘောမျိုးဖြစ်ပြီး encryption နဲ့ decryption ပြုလုပ်ကာ Keylogger တွေနဲ့ api hookers တွေရဲ့ ဖမ်းယူခြင်းကို အဓိပ္ပါယ် လွဲသွားအောင် ပြုလုပ်ခြင်းပါပဲ။
ကျွန်တော် KeyScrambler Full Version လေးတင်ပေးထားပါတယ်။ အထဲမှာ Crack ဖိုင်လေးကို 32 နဲ့ 64 Bits အတွက် နှစ်မျိုးခွဲတင်ပေးထား ပါတယ်။ မိမိတို့ သက်ဆိုင်ရာ OS အလိုက် Install လုပ်ထားတဲ့ Folder လေးထဲကို ကူးထည့်ပေးပြီး Restart ချပေးလိုက်ရင် Full Version လေးရပါပြီ။
▼ dropbox မှာ ဒေါင်းယူပါ ▼ OR ▼ mediafire မှာ ဒေါင်းယူပါ ▼
Original link - http://www.nayminnmaung.com/2015/08/protect-yourself-from-keyloggers-using.html
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Thursday, August 27, 2015 No comments:
ကဏ္ဍ Hack, KeyLogger, PC-Software, ဆော့ဝဲလ်အသုံးပြုနည်း
ဒီ PC Booster လေး ကတော့ Task အမျိုးအစား လေးမျိုး ခွဲပြီး ကျွန်တော်တို့ စက်တွေရဲ့ performance တွေကို Tweaks လုပ်ပေး နိုင်ပါတယ်။ လေးပိုင်း ရှိပါတယ်။
HOME activities uninterrupted အပိုင်းမှာ ဆိုရင် Movies တွေ Online Videos တွေ ကြည့်နေမယ်၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ Skype ဒါမှမဟုတ် အလားတူ Program လေးတွေ အသုံးပြုနေမယ်၊ Browsers တွေကနေ messengers တွေ အသုံးပြု နေမယ် ဒါဆိုရင်တော့ Home mode လေးကို ဖွင့်ထား လိုက်ပါ။
OFFICE work done in less time ဆိုတဲ့ အပိုင်းမှာ ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ text documents, calculating, emailing, messaging ဒါမှမဟုတ် တခြား office applications တွေ အသုံးပြု နေချိန်မှာ ဒီ Office mode လေးကို ဖွင့်ထား လိုက်ရင် ကျွန်တော်တို့ PC Performance လေးတွေ ပိုပြီး မြန်ဆန် လာပါလိမ့်မယ်။
အလားတူ GAMING withafair advantage အပိုင်းမှာလည်း ဂိမ်းကစားနေချိန် Background process တွေနဲ့ Application တွေကို Disable လုပ်ပေးပြီး memory နဲ့ CPU resources ကို ပိုပြီး မြန်ဆန် လာစေမှာပါ ။
CUSTOM experience in one click အပိုင်းမှာတော့ မိမိနှစ်သက်ရာ အပိုင်းကို ရွေးချယ်ပြီး Boost လုပ်ပေးနိုင် ပါလိမ့်မယ်။ Full Version ရအောင် အထဲမှာ Crack Files သုံးဖိုင် ပါဝင်ပါတယ်။ အားလုံးကို Install လုပ်တဲ့ Folder ထဲကို ကူးထည့်ပေးလိုက်ပါ။
Original link - http://feedproxy.google.com/~r/blogspot/GWRdS/~3/e_uSzy27xns/tweakbit-pcbooster-1697.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Monday, August 10, 2015 No comments:
ကဏ္ဍ manager, PC-Software, Speedup
ဝင်းဒိုး အတက်မှာ ကြာနေတဲ့ Computer များ အတွက် Startup Faster 3.3.66
ဝင်းဒိုး အတက်မှာ အရမ်း ကြာနေသော မိတ်ဆွေများ အတွက် ဒီတစ်ခါ ခေါင်းရှုပ်ခံ စဉ်းစားစရာ မလိုအပ် တော့ပါဘူး။ ဒီကောင်လေး ကိုသာ အသုံးပြု လိုက်ပါ။
ကလစ် တစ်ချက်နဲ့ ကျွန်တော်တို့ ဝင်းဒိုး အတက် မြန်ဆန် လာပါ လိမ့်မယ်။ Full Version ရအောင် အထဲမှာ Username နဲ့ Keys လေးတွေ ထည့်ပေး ထားပါတယ်။
သုံးချင်ရင် အောက်မှာ ဒေါင်းယူ နိုင်ပါတယ်။
အားလုံးပဲ အဆင်ပြေနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ ...
Original link - http://feedproxy.google.com/~r/blogspot/GWRdS/~3/xc7ksSok1qo/startup-faster-3366.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
ကဏ္ဍ PC-Software, Speedup
MPC ဆိုတဲ့ media player classic လေးကိုတော့ မိတ်ဆွေ တော်တော် များများ သိကြ မှာပါ။ External codecs တွေထပ် Install ပေးစရာ မလိုပဲနဲ့ အတွင်းမှာ Build - in ပါဝင်တဲ့ Media Codes တွေနဲ့ တင် audio, video codecs တော်တော် များများကို Support လုပ်ပေး နိုင်ပါတယ်။
ပေါ့ပေါ့ ပါးပါးနဲ့ သုံးရတာ အဆင်ပြေတဲ့ အပြင် နောက်ဆုံး Update ဖြစ်တဲ့ အတွက် Features လေးတွေ တိုးလာ သလို interface ထဲမှာ ဘာသာ စကား ၁၄ မျိုး ပါဝင် ပါတယ်။
အောက်မှာ ယူသွား လိုက်ပါ ခင်ဗျာ ...
Original link - http://feedproxy.google.com/~r/blogspot/GWRdS/~3/hwmZ14KMoPE/mpc-hc-179137.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
ကဏ္ဍ PC-Software, Player
Chameleon Startup Manager Lite 4.0.0.903
Startup Manager ဆိုတဲ့ အတိုင်းပါပဲ Windows startup ကို Error ကင်းကင်းနဲ့ အမြန်ဆုံး တက်နိုင် ဖို့က အဓိက ပါပဲ ... Startup delay, priority, consecutive program launch, day selection စတဲ့ Window ကိုနှောင့်နှေး စေနိုင်မယ့် Error တွေကို Restart ချစရာ မလိုပဲ နဲ့ကို real-time monitoring နဲ့ ဖြေရှင်း ပေးနိုင် ပါလိမ့်မယ်။
Original link - http://feedproxy.google.com/~r/blogspot/GWRdS/~3/GjFtsCaQKno/chameleon-startup-manager-lite-400903.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Tuesday, August 04, 2015 1 comment:
ကဏ္ဍ manager, PC-Software
Ardamax Keylogger 4.4 Full Multilingual
Keylogger ဆိုရင်တော့ တော်တော် များများကို သိကြ မှာပါ။ Users activity တွေနဲ့ log file တွေကို သိမ်းယူ ထားနိုင်တဲ့ အတွက် မိမိ ကလေး ငယ်တွေ လမ်းမှား မရောက်အောင် စောင့်ကြည့် ပေးနိုင်မယ့် Keylogger လေး ဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး။
Email log, FTP delivery , Network delivery , တွေကို ဖမ်းယူ ပေးနိုင်မယ့် အပြင် task bar, system tray, Window2000 / XP / 2003 / Vista / Windows7/ 8 Task Manager, process viewers (Process Explorer, WinTasks ) စတဲ့ အရာတွေ မှာလည်း ဖေါ်ပြပေးမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
AIM , Windows Live Messenger , ICQ , Skype , Yahoo Messenger , Google Talk , Miranda , QiP စတဲ့ Application တွေ ကိုလည်း ဖမ်းယူ ပေးနိုင် ပါလိမ့်မယ် ။ OS အနေနဲ့ Windows 2000, XP, 2003, Vista,7နဲ့ Windows 8 အထိကို Support လုပ်ပေးနိုင် ပါလိမ့်မယ်။
Original link - http://feedproxy.google.com/~r/blogspot/GWRdS/~3/nOVMnyWDiZo/ardamax-keylogger-44-full-multilingual.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Tuesday, August 04, 2015 No comments:
ကဏ္ဍ KeyLogger, PC-Software
ဒီတစ်ခါ ကျွန်တော်တို့ နှစ်သက် သလို schedule time အလိုက် shutdown, power off, reboot, hibernate, suspend (သို့) log off စတဲ့ Features လေးတွေကို ပေါ့ပေါ့ ပါးပါးနဲ့ ပြုလုပ်နိုင် ပါလိမ့် မယ်။
ဒါ့အပြင် စက်ကို Shutdown ချလို့ပြီးတဲh အချိန်မှာတောh ဒီကောင်လေး ကနေ ကျွန်တော်တို့ စက်တွေရဲ့ Performance ကို ကျစေနိုင်တဲ့ Recycle Bin, temporary files, IE cache, IE cookies, IE history, IE auto-complete entries တွေနဲ့ recent document list တွေကို ရှင်းလင်းပေး ပါလိမ့်မယ်။
ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ 1.2 MB ပဲရှိပါတယ်။
Original link - http://feedproxy.google.com/~r/blogspot/GWRdS/~3/SyIHyTFi-9I/pc-auto-shutdown-62.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
ဒီ PortExpert ကတော့ ကျွန်တော်တို့ personnal computer cybersecurity တွေ အတွက် အသေးစိတ် အချက် အလက် တွေကို ပြပေးနိုင် ပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်တော်တို့ စက်ထဲက ဘယ် Application တွေ ၊ ဘယ်လို Port တွေ ကနေ Internet ကို ချိတ်ဆက်နေလဲ ဆိုတာကို အသေးစိတ် ဖေါ်ပြပေးမှာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် မိမိတို့ personnal computer cybersecurity အတွက် ဆောင်ထားသင့်တဲ့ Application လေး တစ်ခုပါ။ စိတ်ရှည်ရှည်လေးနဲ့သာ ဒေါင်းထား လိုက်ပါဗျာ ။
ဖိုင်ဆိုဒ်ကလည်း 1.4 MB ပဲရှိပါတယ်။
from နေမင်းမောင် ( နည်းပညာ
Original link - http://www.nayminnmaung.com/
ကဏ္ဍ PC-Software, Security, SystemCare
ဒီ BWMeter လေးကတော့ bandwidth တွေနဲ့ Graphical နဲ့ numerical display ကို ပြသ ပေးနိုင်ခြင်း၊ တိကျတဲ့ bandwidth တွေကို တိုင်းတာ ပေးနိုင်ခြင်း၊ network interfaces / adapters တွေရဲ့ monitor display ဖြစ်ခြင်း၊ network address, port, application တွေရဲ့ Filter ဖြစ်ခြင်း၊ Traffic control, access control တွေနဲ့ speed limits တွေကို တိုင်းတာပေးနိုင်ခြင်း၊ local network တွေနဲ့ internet traffic တွေရဲ့ Statistics တွေကို ပြသပေးနိုင်ခြင်း၊ hackers, viruses, တွေနဲ့ hostile internet traffic တွေကို ပြသပေးနိုင်ခြင်း၊ LAN, WAN, VPN, ADSL, xDSL, Modem, Dial-Up စတာတွေကို Support လုပ်ပေးနိုင်ခြင်း စတဲ့ Features လေးပေါင်း မြောက်များစွာ ပါဝင်တဲ့ Application လေးတစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Full Version ရအောင် အထဲမှာ Crack ဖိုင်လေးပါ ထည့်သွင်း ပေးထား ပါတယ်။
Original link - http://feedproxy.google.com/~r/blogspot/GWRdS/~3/fPUj_CvfLi4/bwmeter-690.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
ကဏ္ဍ network, PC-Software
WinRAR 5.30 Beta 1 (x86 / x64)
WinRAR ကတော့ ကျွန်တော်တို့ အသုံးပြု နေကြ ဖြစ်တဲ့ အတွက် မိတ်ဆွေ များလည်း သိကြမယ့် Archive manager လေး တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ZIP files တွေ ချုပ်နိုင် စွမ်းထက် 8 ရာခိုင်နှုန်းမှ 15 ရာခိုင်နှုန်း အထိ ပိုချုပ် ပေးနိုင်တဲ့ အတွက် RAR ကိုပဲ အသုံးပြု တာများ ပါတယ်။ နောက်ဆုံး Update Version လေးပါ။
Original link - http://feedproxy.google.com/~r/blogspot/GWRdS/~3/5pDJf0-V0dY/winrar-530-beta-1-x86x64.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
ကဏ္ဍ PC-Software, WinRaR
ကျွန် တော်တို့ Internet Speed နဲ့ Web Browsers တွေကို ဖွင့်ရတဲ့ Speed လေးတွေ မြန်ဆန် လာအောင် ဒီကောင် လေးက အထောက် အကူပြု ပါလိမ့်မယ်။
နောက်ဆုံး ထပ်ထွက် လာတဲ့ Full Version လေး ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ကိုလည်း ကျွန်တော် Connection မြန်အောင် အထောက် အကူပြုပေး နိုင်တဲ့ Software လေးတွေ ရလာတာနဲ့ တင်ပေး သွားပါ့မယ်။
အသေးစိတ် သိလိုရင် တော့ သူ့ရဲ့ Home Page လေးမှာ လေ့လာကြည့် လိုက်ပါဗျာ ။အောက်ကလင့်ခ် လေးကသူ့ရဲ့ Home Page လေး ဖြစ်ပါတယ်။ အထဲမှာ Full Version လေး ရအောင် Crack ဖိုင်လေးပါ ထည့်ပေး ထားပါတယ်။
Registry ထဲမှာ Delete လုပ်ရမယ့် key လေးတွေ ကိုလည်း အောက်မှာ ပုံနဲ့ ပြပေး ထားပါတယ်။ Delete လုပ်ပြီး တာနဲ့ Uninstall မလုပ်ပဲ ထပ်ပြီး နောက် တစ်ကြိမ် Run ပေးပါ။
Original link - http://feedproxy.google.com/~r/blogspot/GWRdS/~3/p0Kb1stiRg4/cfosspeed-1008-build-2216-full.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Thursday, July 23, 2015 1 comment:
ကျွန်တော်တို့ ဒီနေ့ခေတ်မှာ Websites တိုင်းလိုလို ကြော်ငြာတွေနဲ့ ပြည့်နေတာ များပါတယ်။
Firefox, Chrome, IE, Safari, Opera နဲ့ စတဲ့ Browsers တွေမှာ ကြော်ငြာတွေ များလို့ တစ်ခါတလေ စိတ်ညစ်နေ ရတဲ့ သူများ အတွက် အဆင်ပြေမယ့် Universal Ad Blocker လေး တစ်ခုပါ။
ကလစ် တစ်ချက်နဲ့ Web Browsers တွေရဲ့ Advertisements တွေကို Block ပေးတဲ့ အပြင် ဘယ်အချိန် မဆိုပြန်ပြီး Unblock ပေးနိုင် ပါတယ်။ System ကို Log-off ဒါမှ မဟုတ် Restart ပေးစရာ မလိုတဲ့ အပြင် Fully Portable ဖြစ်တဲ့ အတွက် Java, .NET နဲ့တခြား Components တွေလည်း မလို အပ်ပါဘူး။
ဖိုင်ဆိုဒ်ကလည်း 2.4 MB ပဲရှိပါတယ်။
Original link - http://feedproxy.google.com/~r/blogspot/GWRdS/~3/6wkFb6pk14s/universal-ad-blocker-v35-portable.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Thursday, July 23, 2015 No comments:
ကဏ္ဍ Blocker, PC-Software, Portable
ဒီတစ်ခါ ကျွန်တော်တို့ USB Stick, External HDD, (Hard Drive) phones, smartphones, digital cameras စတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို ကျွန်တော်တို့ Desktop, Laptop တွေနဲ့ ချိတ်ဆက်တဲ့ အချိန်မှာ စက်တွေ ထဲကို ဝင်ရောက် လာနိုင်တဲ့ Malware နဲ့ အခြားသော Virus များ ကို ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ ပေါ့ပေါ့ ပါးပါး မြန်မြန် ဆန်ဆန် အသုံးပြုလို့ ရမယ့် Tools လေး ဖြစ်ပါတယ်။
ဖိုင်ဆိုဒ်ကလည်3းMB ပဲရှိပါတယ်။
ကဏ္ဍ PC-Software, Security
ဒီတစ်ခါတော့ Format Factory ရဲ့ နောက်ဆုံး Update လေးကို တင်ပေး လိုက်ပါတယ်။ အသုံးပြု ဖူးတဲ့ သူတွေ ကတော့ သိမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ ဒီကောင်လေးက MP4/3GP/MPG/AVI/WMV/FLV/SWF. MP3/WMA/AMR/OGG/AAC/.Rip DVD to video file , Rip Music CD to audio file.MP4 files support iPod / iPhone / PSP / BlackBerry format. စတဲ့ သီချင်းဖိုင်တွေ သာမက WAV. JPG / BMP / PNG / TIF / ICO / GIF / TGA စတဲ့ Picture ဖိုင် Type တွေ ကိုပါ ပြောင်းပေး နိုင်ပါတယ်။
DVD / CD to ISO / CSO, ISO <--> CSO စတဲ့ Function တော်တော် များများကို လုပ်ဆောင် ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဘာသာ စကား ကိုလည်း အမျိုးပေါင်း 60 နီးပါး ပြောင်းလဲ အသုံးပြုနိုင် ပါတယ်။
အဲ့ဒါ အပြင် Audio Joiner, Video Joiner, Mux, နဲ့ Media File Info ဆိုတဲ့ Function တွေလည်း တော်တော် များများ ပါဝင် ပါတယ်။
Original link - http://feedproxy.google.com/~r/blogspot/GWRdS/~3/EaCUcDBZf8g/format-factory-3700.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
ကဏ္ဍ Formatter, PC-Software